Amashishini amancinci Ukujikeleza iBhokisi yezixhobo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 22, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Itekhnoloji yethu exhasa,IFomstack (ngokuba ifom ye-intanethi yokwakha), Eyakhelwe kunokwakheka okungummangaliso kokubonelela ngesikhokelo kubuchule nakwizixhobo ezinokuthi zenze ishishini elincinci. Isixhobo ngasinye sineendleko ezifanelekileyo kwaye kulula ukuzisebenzisa.
Ukuphuhlisa isicwangciso sokuthengisa kunokuba nzima. Ngethamsanqa, i Iibhokisi zezixhobo zoMjikelezo woShishino oMncinci ikunceda ulungelelanise inkqubo, ngalo lonke ixesha ubonelela ngezixhobo ezithandwayo eziza kukuvumela ukuba ufumane ngcono kwaye ulawule abathengi bakho. Landela isikhokelo esingezantsi ngolwazi oluthe kratya!
tags: Uphuhliso lwamashishiniukubandakanyeka kwabathengiUlawulo lwabathengiindlela yobumeurhwebo inboundbamba phambiliukuthengisa